Iimpawu zokuzilahla ezithandekayo ukukwenza uzive ungcono
Iincwadi Quotes Funny
Iincwadana eziPhezulu zokuPhula
Ezi ziPapayi zePapu zokuPhuphuka eziPhuphukayo ziPakisha
Ukutshatyalaliswa kukuchaphazela umzimba kunye nengqondo
Kungakhathaliseki ukuba ubuye ubenokuphulukana nenye okanye ukuphulwa kwezinto ezili-12, elowo uphupha umoya wakho. Ukwahlukana kukushiya. Ichaphazela ukuzithemba, ukuzithemba kunye nobudlelwane bakho. Abantu abaninzi abanentliziyo ephazamisekayo bayaziwa ukuba baxakeke ekugqithiseni: kuba kukutshaya, iziyobisi, okanye ukutya . Ukuphazamiseka kwengqondo kubangela ukuphazamiseka ngokwasemzimbeni: ukulala, ukulahlekelwa kwememori, ukufumana ubunzima, kunye nokuphazamiseka kwesisu.
Ngelixa ungafanele udibanise usizi lwakho otywala okanye iziyobisi, kufuneka ufumane induduzo kwiintetho zokomoya, umculo , yoga, kunye nomdaniso . Thatha imisebenzi eyenza ukukhulula uxinzelelo, uphilise umphefumlo wakho. Funda iincwadi zokuziphucula ngokwabo, izicaphuno eziphefumlelweyo , okanye iingcaphuno ezihlekisayo zokugubungela isithotho. Yabelana ngeemvakalelo zakho kunye nabahlobo, ngaphandle kokunamathela kwixesha elidlulileyo. Uninzi lwazo zonke, ziphephe ukuzigxeka.
Ukuzihlaziya kunceda ukunyuka kokuwa emva kokuhlukana okubi. Ukuhleka kukhulula i-endorphins efunekayo ukulwa nokudandatheka. Ukuzihlaziya kukukunceda ukuba ucinge ngeemeko ezisemthonjeni. Abaninzi bama-humorist baye baxhamla ngokutshabalalisa. Funda le ngqokelela yeengcaphuno zokuhlukana ezihlekisayo. Ezi zicatshulwa zenza loo nto ilula, ikhangele amahlaya angenakubungozi. Abanye bacaphuna ukuhleka ngothando kunye nomtshato . Vumela ukuhleka kudlale emlonyeni wakho xa ufunda ukucaphukisa okuhlekisayo.
"Uthando ngumlilo. Kodwa nokuba uya kufudumala intlambo yakho okanye utshise indlu yakho, awukwazi ukutshela."
"Bonke abathandayo abalahlwe kufuneka banikwe ithuba lesibini, kodwa kunye nomnye umntu."
"Enye into endiyayiqhekeza ngayo kwaye okokuba ukuba undibhinqa omnye umfazi. Andiyi kumela loo nto."
Ukwahlukana phakathi komtshato kunye nokuhlukana ngokwasemthethweni kukuba ukuhlukana ngokwasemthethweni kunika indoda ithuba lokufihla imali yakhe. "
"Wonke umfazi kufuneka abe nezilwanyana ezine ebomini bakhe. I-mink kwindawo yakhe yokugumbana, igagu egalaji yakhe, i-tiger ebhedeni lakhe, kunye ne-jackass yokuhlawula konke."
"Ukwesaba kwesizungu kunkulu kunokwesaba kobukhoboka, ngoko sitshata."
"Ungalokothi uzizisole." Ukuba kulungile, kuyamangalisa. Ukuba kubi, ngamava. "
Uthando lizwi eliva rhoqo,
Inzondo lizwi elingekho.
Uthando, ndixelelwa, luxabiseke ngakumbi kunegolide.
Uthando, ndiyifunde, lushushu.
Kodwa inzondo isenzi esithi kum,
NoLuthando kodwa isilwanyana kwi-mart.
Naluphi na umntwana esikolweni unokuthanda njengoyatha,
Kodwa ukuzondana, mfana wam, ubuGcisa.
"Andizange nditshatile ngenxa yokuba bekungekho mfuneko." Ndineemfuyo ezintathu ekhaya, eziphendula injongo efanayo njengendoda. Ndine inja, ekhwaza rhoqo ekuseni, i-parrot efungela yonke imini kunye nekati efika ekhaya ngokukhawuleza busuku."
"Ukuzondwa ngumvakalelo onjalo wokunethezeka, kunokusetyenziswa kuphela kumnye esimthandayo."
Miss Piggy , i -Muppet Show
"Ngaba kukho ukuphilisa intliziyo ephukile? Ixesha eliphela liyakwazi ukuphulukisa intliziyo yakho ephukile, njengoko ixesha liyakwazi ukuphilisa iingalo zakhe nemilenze."
"Unokulindela njani umfazi ukuba ujabule nendoda enyanzela ukuyiphatha njengokuba wayeyindoda eqhelekileyo."
"Inkxalabo nabasetyhini kukuba bavuyiswa nantoni na ... uze umtshatile!"
Isisombululo esicacileyo nesisisigqibo somsebenzi wendlu ngukuvumela abantu benze imisebenzi yendlu, bathi, iminyaka engamawaka amathandathu anesibini, ukuya kwizinto .Ingxaki kukuba ngaphezu kweminyaka, amadoda ahlakulele ingcamango yabo yonke into abayenzayo , ukuze kungekudala bayijika umsebenzi wendlu ibe yinto efana neyeshishini njengokuba ngoku baya kuqesha abalobi kwaye bathenge iikhompyutheni baze baqhube kwiinkomfa zendlu yaseBermuda, kodwa abazange bahlambulule nantoni na. "
"Ngamanye amaxesha ndiyazibuza ukuba ngaba amadoda nabasetyhini bahambelana ngokwenene.
"Inkolelo endala, yatshata indoda endala kuba ikhulile.
Khangela umncinci. "
"Ndandifunda okokuqala ingcamango yokungabikho gonyamelo kumtshato wam."
USir George Jessel
"Umtshato uyiphutha elowo umntu kufuneka enze."
Emva kweminyaka engama-7 yomtshato, ndiqiniseke ngezinto ezimbini. Okokuqala, ungalokothi udibanise kunye kunye nesibini, uya kufuna iimpahla zokuhlambela zombini ... zombini kuye. . "
"Xa ndicinga ngokuvuya, intombazana ekhululekile, kunye nokujonga umntu ogulayo, ephazamiseka ukuba umfazi ulahlwa ngokutsha, ongayikukhanyela into yokuba ngumtshato."
"Yonke into ebalulekileyo, ehlakaniphile, ebhinqileyo ekhuseleyo yowesifazane onama-40 kunye naso, kukho i-balding, i-palic relicly bants in a bantshi ephuzi eyenza isilumko kunye nomncedisi oneminyaka engama-22 ubudala."
"Ndicinga ^ ngoko, ndingatshatanga."
"Ukuqhaqhaqhazela kunjengokubetha umshini weCoke. Awukwazi ukukwenza ngokukrola enye. Uza kuwugubungela ngokuphindaphindiweyo, kwaye emva koko uhamba."
"Kukho ixesha elincinci ngaphambi kwe-Valentine's Day breaks that allows people to cancel reservations."
"Ukuba kuphela umntu onokuthetha uthando lokwenene kumthanda wamanga njengokuba umntu onokutshela amakhowe avela kwii-padstools."
"Hlala usondele, tyelela rhoqo."
"Umtshato liziko elikhulu, kodwa andikulungele ukuba kubekho isikhungo."
U-Elizabeth Elizabeth I waseNgilani
"Ndingathanda ukuba ngumceli kwaye ndingatshatanga, kunokumkanikazi kwaye nditshatile."
"Ngaba unokucinga ukuba ihlabathi lingenabo abantu? Akunabarhoxisa kunye nabaninzi abafazi abathandekayo."
"Kuhlala kungaqondakali kubantu, ukuba ibhinqa lifanele lithande umtshato."
"Ndiyathanda ukuvuka ekuseni nganye ndiva umntu omtsha."
"Inene indlela yokuhlala yedwa ukutshata."
"Yonke into utshatile, ukuba ufumana umfazi omhle, uya kuvuya. Ukuba ufumana okubi, uya kuba ngumfilosofi."
"Ndiyicinga ukuba kuphela indlela yokumisa umtshato ukuyeka umtshato."
"Yintoni abafazi abayifunayo: Ukuthandwa, ukuphulaphulwa, ukufunwa, ukuhlonishwa, ukufunwa, ukuthenjwa, kunye namaxesha athile, ukuba nje kubanjwe.
Iimpawu eziMnandi malunga nabafazi
Quotes Relationship Quotes
Iimpawu eziMnandi zokuPhila
20 Yima amaKomidi abo bafumana ngokupheleleyo ukuba ngaba ngumzali
Iimpawu eziMnandi malunga nabafana
UGeorge Carlin Iimfundiso Zityhila Umntu Emva "Kwamagama Amanqaku asixhenxe"
Ezi zi-20 zeNkcazo zoBomi eziKhumbisayo zikhumbuza ukuba ungathabathi ngobomi kakhulu
I-ROFL Quotes Funniest Quotes That Will Make You Hit Instant
Iimvo ezizithandayo ezivela kwi-Faulkner 'Njengoko Ndiya kulala'
'Igumbi' nguEmpan Donoghue - Ukuhlaziywa kweNcwadi
Ixesha elide lokuFunda: Qala ngeSiseko
Yintoni iDesk Drive?
"Iilwimi elisezantsi" likaGeorge Carlin
I-10 ye-Oldest Living Jazz Musicians
Ifowuni yokuLawulwa kokuQala
Umbuso wehlabathi uMdra
Fumana i-Ivy League Degree Online
I-Painting ye-oyile i-Glazes: Umculi uveza iimfihlo zakhe
Umvelaphi kunye Nentsingiselo Yomntu Wokugqibela, "Long"
I George Quotes kwiNkolo
Ukuxhasa i-Database Access 2013
Uvavanyo lweeHack zeVAR
Bamba i-Esbat Rite - Gubha iNyanga epheleleyo
Ukwahlukana Phakathi Kokumelana Nalo
I-Acids kunye neZiseko-Ukubala i-pH ye-Acid Acid
Ngaba Ukuqaliswa Kufuneka Ukuba yiWiccan?
'Bella Siccome Un Angelo' Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
I-Augusta National Golf Club
Izibhengezo ze-Hercules (iinqwelo / iHeracles)
Ngaba Ufanele Unikeze Imiphumo YaseKlasini Yokunciphisa Ukuziphatha Okulungileyo?
Yiyiphi iFransi yokuHlaba kwamahhala?
Icandelo leNkundla ePhakamileyo yeGibons v. Ogden